Raha te ho lohany | NewsMada
Raha te ho lohany
Ihazakazahan’ny mpanao politika, indrindra fa ireo mitonona ho kandidà ho filoham-pirenena, amin’ny fifidianana ho avy io, ny fisehoana vahoaka, amin’ny hetsika rehetra miseho eto amin’ny firenena. Manomboka manakaiky ny vahoaka andriamifidy amin’izay izy ireo, ary efa manao izay hahazoana ny fon’ny olona.
Samy manana ny paikadiny sy ny fomba fisehoany avokoa ny tsirairay. Tsotra anefa ny vahaolana raha te ho lohany, manao ny mety sy mahitsy ary mandeha amin’ny fahamarinana. Ho sarotra amin’ireto politisianina efa zatra ny mamita-bahoaka ireto anefa izany hizotra amin’ny marina izany. Tsy misy ho sahy hanao izany na iray aza. Tsy matoky tena satria efa zatra ny niholakolaka.
Tsy maintsy mitady ny fomba rehetra izy rehetra ireo, hisehoana mivantana amin’ny vahoaka. Miseho fahitalavitra, miteny amin’ny onjampeo, mivoaka amin’ny gazety. Miezaka ny hatao lohatenim-baovao satria samy te ho fanta-bahoaka. Raha te ho lohany anefa, tsy mila misehoseho fa manao asa mangina sy milamina. Tsy mirotoroto nefa tsy tara, tsy mihazakazaka nefa tsy gisitra.
Tsy adala akory ny vahoaka fa mahafantatra izay mahavita azy. Na tsy miseho amin’ny gazety sy dradradradraina amin’ny haino aman-jery aza, malaza ho azy. Betsaka ny porofon’izany, raha tsy hilaza afa-tsy ny mompera Pedro Opeka. Tsy mitabataba izy, ary tsy mila gazety rehefa manao zavatra, nefa malaza sy fanta-bahoaka. Izany no atao raha te ho lohany. Soa ihany fa olon’Andriamanitra izy fa tsy mpanao politika.
Hisy hiakatra tosidrà sy ho torana am-pandehanana ireo mifarombaka miseho vahoaka lava ireo, nefa mety ho rambony.
Raha te ho lohany, tsy mikoropaka fa maka milamina. Miasa am-pitoniana sy maneho vokatra azo tsapain-tanana, tsy mila tantaraina. Dia ny vahoaka no hanandratra sy hametraka azy ho lasa lohany.